Waa Maxay Goobta Gawaarida? - Jawaab celceliska
website-yada iyagoo adeegsanaya farsamooyinka shabakada webka. Mawduucan waxaa lagu qeexay ujeedada soo saarista dakhliyada, adoo adeegsanaya xayeesiinta ama iibinta macluumaadka isticmaalaha. Goobaha kala duwan ee wax lagu duubo waxay ku kala duwan yihiin qaababka iyo noocyada, waxayna ka bilaabmaan min 12 (spam) bogag internetka ah ilaa qiimaha qiimaha iyo iibka dukaamada internetka.
Mashiinno badan oo raadin gaar ah Google ayaa loo tixgelin karaa inay yihiin goobaha xoqista. Waxay ka soo qaataan sheekooyinka ka yimaada bogag badan, ku keydi xogta, index iyo soo bandhig waxyaabaha la soo saaro ama lagu tirtiray dadka isticmaala internetka. Dhab ahaantii, inta badan maadooyinka la xoqay ama laga soo saaray mashiinnada raadinta ayaa la mamnuucay.
Lagu sameeyey xayeesiin:
Qaar ka mid ah goobaha xoqitaanka ayaa loo abuuray si lacag loogu helo internet iyagoo isticmaalaya barnaamijyo xayeysiin duwan. Xaaladahan oo kale, waxay u magacaaban yihiin Made for websaydhka AdSense ama MFA. Ereyga qarsoodiga ah waxaa loola jeedaa goobaha aan lahayn qiimo dib loo furo oo la filayo in ay soo jiidato, soo jiidato oo ay marti galiso dadka soo booqda boggaga internetka ee loogu talagalay helitaanka xayeysiisyada xayaysiinta. Waxyaabaha loogu talagalay bogagga shabakadaha Adsense iyo blogs waxaa loo tixgeliyaa sida spam engine search raadi. Waxay ku dhajinayaan natiijooyinka raadinta natiijooyinka aan ka dhicin. Qaar ka mid ah bogagga xoqidda ayaa loo yaqaanaa inay isku xiraan boggag kale iyo ujeedadoodu tahay inay hagaajiyaan darajada mashiinka raadinta adoo adeegsanaya shabakadaha gaarka loo leeyahay..Ka hor inta aan Google ku cusboonaysiisin algorithms search, noocyada kala duwan ee goobaha xoqista loo adeegsaday inay caan ku noqdaan khubaro SEO SEO khabiir iyo suuqa. Waxay u isticmaaleen macluumaadkaan si ay u noqdaan kuwo isdaba-joog ah waxayna fuliyaan shaqooyin kala duwan.
Meelaha wax lagu qodo waxaa lagu yaqaanaa inay jabiyaan sharciyada copyright. Xittaa qaadashada waxyaabaha ka imaanaya goobaha furan ee furan waa xadgudubka copyright, haddii lagu sameeyo hab aan u ixtiraameynin shatiga. Tusaale ahaan, Liisanka Ganacsiga ee GNU iyo Sharciyada Sharciga ah ee Sharciga ah ayaa loo isticmaalay Wikipedia oo looga baahan yahay in dib-u-daabacidda WikiLeaks ay tahay in ay ku wargaliso akhristayaasha in maadada laga soo koobay farriinta.
Nidaamka ama qaababka shabakadaha internetka ayaa lagu beegsadaa kala duwanaanta ilaha kale. Tusaale ahaan, bogagga leh xog badan ama macluumaad sida macaamiisha macaamiisha, diyaaradaha iyo dukaamada qaybaha, waxaa si joogto ah loogu bartilmaameedsadaa tartamayaasha. Dhamaan tartamayaashu waxay rabaan inay ogaadaan qiimaha hadda iyo qiimaha suuqa ee astaanta. Nooc kale oo xoqan ayaa jiidaya jeexjeexyada iyo qoraalka laga soocayo bogaga sareeya ee loogu talagalay ereyo gaar ah. Waxay u muuqdaan inay sare u qaadaan heerkooda bogga natiijooyinka raadinta (SERP) iyo piggyback ee bogagga asalka ah ee bogga. Akhrista RSS ayaa sidoo kale u nugul cutubyada. Boorsooyinka ayaa sida caadiga ah la xiriira beeraha xiriirka ah waxaana la dareemaa marka goobta xoqitaanka ee isku xira isla bogga mar labaad iyo mar kale.
Barnaamijka abuuray boggaga warshadaynta ayaa laga yaabaa inay iibsadaan domaanyadii dhacay waqtigoodii si ay u helaan dib-u-habeyn loogu talagalay SEO-yada. Tababarkani wuxuu u fasaxayaa khabiirada SEO in ay isticmaalaan dhammaan dhabarka magac domain. Qaar ka mid ah spameradu waxay isku dayaan inay la macaamilaan mawduucyada goobaha dhacay iyo / ama nuqul ka bixiyaan mawduucyada oo dhan laga soo xigtay Internet-ga, iyagoo ilaalinaya xaqiiqada iyo muuqaalka goobtaas. Adeegyada martigelinta badanaa waxay bixiyaan xarun si ay u helaan magacyada domain ah oo dhacay, iyo khadadka ama spammers waxay u isticmaalaan macluumaadkan si ay u horumariyaan boggooda internetka Source .